Ihe mkpuchi mmiri Oclean W10 - dọkịta ezé gị | TeraNews.net
Ihe mkpuchi mmiri Oclean W10 - dọkịta ezé gị
na-ede akwụkwọ Kravets Pavel E bipụtara 12.10.2021
Ị maara na iji ahịhịa ezé eme ihe ugboro ugboro na -emetụta ọnọdụ ezé. Mgbasa ozi na -atụ aro, mana ndị dọkịta ezé machibidoro iwu. A sị ka e kwuwe, eri ahụ na -egwepịa ọnụ ezé, na -ekepụta oghere dị na ya. Mana enwere ụzọ ọpụpụ - ị nwere ike zụta mmiri mmiri. Dọkịta ezé America bụ Gerard Moyer, na 1959, mepụtara obere eriri mmiri nke na-enyere ndị ọrụ aka ịsị caries ruo mgbe ebighị ebi. Onye na -agba mmiri Oclean W10 Water Flosser bụ ihe ngwọta pụrụ iche anyị chọrọ ịme ka ị mara. N'ezie, na mgbakwunye na ịta ikikere ezé, ekwentị mkpanaaka nwere ike ịhịa aka na chịngọm ma hichaa ire.
Kedu ihe kpatara ịchọrọ onye na -agba mmiri Oclean W10 Water Flosser
Obi abụọ adịghị ya, nsí ezé bụ ụzọ kachasị mma isi ehicha ezé gị ọtụtụ ugboro kwa ụbọchị. Nke a bụ eziokwu a na -apụghị ịgbagha agbagha nke dọkịta ezé ọ bụla ga -akwado. Mana ihe ị ga -eme na irighiri nri na nje nke nọ na mpaghara gbara ọchịchịrị. Ebe ahịhịa na -erughị. Ị nwere ike ịsacha ọnụ gị nke ọma. 10-15 ugboro. Na mgbalị pụrụ iche iji mepụta mgbali zuru oke iji sachapụ ihe niile na -etinye na ezé.
A haziri irrigator ka ọ dị mfe ọrụ. Ngwaọrụ a nwere ike imepụta mmiri dị warara n'okpuru nnukwu nrụgide. Dị ka oche eze. Mmiri irrigator dị mfe ịtọlite ​​ma rụọ ọrụ. Ị nwere ike ịgbanwe mmetụta nhicha, dozie nrụgide ma ọ bụ ugboro mgbali. Na -asachapụ oghere ọnụ site na nje na irighiri nri, onye na -agba mmiri Oclean W10 Water Flosser na -arụ ọrụ abụọ bara uru:
Ịhịa aka na chịngọm. A na -eji ọnụ mmiri dị nro eme ihe, nke na -eme ka mmiri jet saa mbara. Ịhịa aka na nsí dị mkpa iji nye mgbọrọgwụ nke ezé na nri. Enamel ezé dị nro bụ ọrịa nke ndị okenye niile na -anaghị enyocha oghere ọnụ nke ọma. Mana enwere ike izere nke a, ma ọ bụ enwere ike wepu nsogbu dị adị.
Imecha ire. Usoro a abụghị maka ndị ọrụ niile, mana maka ndị ọkachamara. Ndị nwere mgbawa miri emi n'elu ire. Microbes na -anakọta n'ime ha wee wepụta isi nwa ebu n'afọ.
Ahịhịa mmiri (Oclean W10 Water flosser) dabara adaba maka ịgwọ ihe e dere ede na gingivitis. Ọ bụrụ na ị na -eji mmiri mmiri kwa ụbọchị, ị nwere ike ịkagbu nleta niile ị na -aga dọkịta eze. N'ịtụle ọnụahịa nke ọrụ eze, ngwaọrụ ahụ mara mma karịa.
Kedu uru nke irrigator Oclean W10 Water Flosser
A ga -enyerịrị onye nrụpụta kredit. Ngwaọrụ a abụghị naanị ihe bara uru, kamakwa ọ dabara adaba ma mee ya n'ụdị mara mma. Mmejuputa iwu a dị mma, o doro anya na ndị ọkachamara n'ọhịa ha arụ ọrụla na Oclean W10 Flosser Water:
Ọmarịcha imewe. Kọmpat na -adị larịị, ịdị arọ, ịdị mfe. Ogwe mmiri na -ewepu, eriri aka dị mma. Akpa mmiri a na -ewepu achọ naanị maka nhicha. A na -emeju mmiri site na nozulu dị n'elu ngwaọrụ ahụ. Enwere bọtịnụ njikwa (ịgbanwuo na họrọ ọnọdụ nhicha ezé). Site n'ụzọ, onye na -agba mmiri Oclean W10 anatala ikike imewe site na iF na IHE EZIOKWU EZIOKWU. Ọzọkwa, ghọrọ onye mmeri nke ụdị Reddot na 2021.
Akwa nhicha arụmọrụ. Onye na -agba mmiri Oclean W10 na -eji moto magnetik na -enweghị ahịhịa. Ọ nwere ike ịmịpụta ihe ruru 1400 kwa nkeji maka ụgbọ mmiri mmiri 0.6 mm. Onye nrụpụta ahụ na -ekwusi ike na onye ọrụ, maka oge nhicha mbụ, jiri ọnọdụ “dị nro” ma ọ bụ “chọrọ”. Nke a dị mkpa ka goms na -eji nnukwu mmiri mmiri.
Enwere ụdị nchacha 5 na isi ahịhịa 4 gụnyere. Maka ihicha oghere dị ọnụ karịa, a na -enye ụdịdị "kpụ ọkụ n'ọnụ", "ọkọlọtọ", "dị nro", "pulsating" na "na -achọ". Ọdịiche dị na mgbali mmiri na ọnụego ihe ọkụkụ n'otu nkeji. Mgbakwụnye dị mkpa iji họrọ ọnọdụ nhicha. Maka ezé, ihe nkwado, ire. Dịka e kwuru n'elu, a na -atụ aro ụdị dị nro na nke achọrọ maka ndị mbido niile. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike iji ụdịdị ndị ọzọ gwuo egwu wee chọta nke kacha mma.
Nnwere onwe dị elu na ịdị mma. Batrị arụnyere n'ime, nke enwere ike ịgbanye site na ọdụ ụgbọ USB Type-C mgbe niile, na-enye ike irighiri mmiri Oclean W10 ruo izu anọ n'otu ụgwọ. Enwere ngụ oge nwere ihe ncheta 4 nke abụọ ka ị gbanwee mpaghara nhicha.
Ebe ị ga -azụta mmiri mmiri Oclean W10 Water Flosser
Site na Ọktọba 11, nkwalite maka ndị niile na-azụ ahịa na-amalite n'elu ikpo okwu ahia AliExpress. Ihe kacha mkpa bụ na ị nwere ike zụta ogbu mmiri Oclean W10 maka $49.99 (malite $59.99). Mbelata 15% na-arụ ọrụ ruo Ọktoba 15, 2021. Akwụkwọ ikike nke onye nrụpụta maka ngwaọrụ "eriri mmiri" bụ afọ 2.
Na mgbakwunye na nkwalite nkwalite, enwere onyinye dị ụtọ sitere na ụlọ ọrụ ahụ:
Ndị ahịa 300 mbụ ga -enweta nsí ezé eletrik (Oclean F1 Sonic Electric Toothbrush);
Ndị na -azụ ahịa iri ise nke nyere iwu site na 50 ruo 11 Ọktoba ga -anata mmiri Oclean W15 n'efu.
Ndị na -azụ ahịa 50 ji nnukwu ego wee nye iwu ka ukwuu ga -enweta ihe nhicha aka (80 ml).
Enwere akwụkwọ ikike ego maka ndị na -azụ ahịa si Russia:
OWTT500 Zụrụ ihe karịrị 2490 RUB - Mbelata 500 RUB.
WOWHIT500 Ịzụta ihe karịrị 2999 rubles - 500 rubles.
WOWHIT550 Ịzụta site na 3599 rubles - Mbelata 550 rubles.
WOWHIT650 Ịzụta Site na 5999 rubles - Mbelata 650 rubles.
WOWHIT1000 zụrụ Ihe karịrị 9999 rubles -Mwepu 1000 rubles.
Ọnụahịa mgbe egochachara ga - $ 44.99... Ị nwere ike ịzụta onye na -agba mmiri Oclean W10 Water Flosser site na njikọ a.
Nwoke nkịta ma ọ bụ ka esi emefu $15000